CPA vs CA (Chartered Accountant): Kukuphi na okulunge ngakumbi wena?
23 Aug CPA vs CA (Chartered Accountant): Kukuphi na okulunge ngakumbi wena?
Kukuphi na okulunge ngakumbi? Yeyiphi isiqu uya kunceda umsebenzi wakho? Xa isigqibo ukhetho lwakho yomsebenzi in mali, usenokuba ndixinekile ukukhetha phakathi CPA okanye CA. Umbuzo ongundoqo ngowokuba ingaba CPA Iinzuzo umendo wakho umsebenzi okanye CA? Akukho mntu ophumeleleyo ecacileyo kuba zombini kwemigangatho yemfundo oku kuya kunceda ukukhulisa izakhono zakho zobugcisa, izakhono mali kunye nezakhono zokulawula ishishini. kwakhona, Abanini-CPA kunye CA ube ukuba ngokulinganayo yanwenwa accounting yorhwebo kunye noluntu - ngoko ke isiqinisekiso nganye inika bhetyebhetye ubuninzi emsebenzini kulo lonke ushishino. Makhe sihlolisise into nganye kwezi izitifiketi kubandakanya kwaye umahluko omkhulu phakathi kwabo bobabini.
Yintoni i CA?
CPA vs CA: career Kwendlela
CPA vs CA: Imivuzo
CPA vs CA: Iimfuno Time
CPA vs CA: Iindleko Certification kanye Requirements
A Eqinisekiswe Public Accountant kuyinto professional abaye wadlula CPA uviwo enikwa yi-American Institute of Certified Accountants Public (AICPA) ndize kuzalisekisa zonke iimfuno zemfundo kunye namava omsebenzi ezinxulumene ngokungenisa uviwo. Ezi ngcali ziingcali e US GAAP, US irhafu yengeniso federal, kunye nezinye iindawo ezininzi US accounting kunye nomthetho mali ezifana zophicotho. Nangona le isatifikethi ohlonelwa ehlabathini lonke, ukuba i US nesikhundla sakhe ezingqina ukuba umsebenzi olunzulu US accounting kwaye ukwazi ukwenza uphicotho kunye irhafu imisebenzi ezinye iingcali abavumelekanga ukuba benze.
A Chartered Accountant (CA) kuyinto professional ophumelele iimviwo CA kunye nemfundo efunekayo kwilizwe lakhe lokuqinisekisa. Kukho imibutho emininzi ezibonelela imfundo kunye noviwo ye CA. A imizekelo embalwa ziquka Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), i-Institute of Chartered Accountants eNgilani naseWales (ICAEW), Institute of Chartered Accountants of India (Ichhai) kunye Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA.) Accountants eziqeshiweyo e Canada, Ostreliya, Nyu Zilend, EMexico Ireland babe kwesivumelwano kunye United States. Ukuba banako ukuphumelela iimviwo equivalency, bakwazi ukusebenza kwi U.S. njengoko CPAs. CA azingcaphephe IFRS kunye neminye imigangatho ye-akhawuntingi ngamazwe. Nangona ke banengqiqo elungileyo kwi US GAAP, azikho njengoko abaqeqeshiweyo kule ngingqi njengoko CPAs.
Ukubiza CPA iza kuvula i omninzi umsebenzi ongakhetha kuzo. Emva kokuba isiqinisekiso yakho CPA unako ukusebenza phantsi amasimi kwengxelo ezahlukeneyo ezifana International Accounting, yangaphakathi & Uphengululo lwangaphandle, Consulting Services, Accounting Forensic, iinkonzo Assurance, Taxation & Planning Financial etc. Ekubeni ingqalelo jikelele, uya kufumana indawo engcono ukusebenza naphi kumazwe amaninzi. Ngokufanayo, Kwakhona CA Isikhundla iza kubonelela iinketho ezininzi kwiindawo ezikhethekileyo ze Accounting ezifana Auditing, Taxation, Finance Corporate, uMthetho Corporate. Emva kokuba Certification yakho CA ungakwazi noba umsebenzi kwi ekhoyo Iinkampani top of mali okanye uqale owakho umsebenzi wakho elinobuchule elizimeleyo.
Zombini CPAs kunye nemivuzo CA kuxhomekeke kwindawo yakho yokuhlala, isihloko somsebenzi, neminyaka yamava. Ngaloo ndlela, ziyashiyana wancipha. Udibaniso lwemivuzo a CPA U.S. i $62,410 kwaye umvuzo median ukuba CA kwi U.K. kuyinto £ 34.637 ($44,849 iUSD). Zombini izitifiketi babe umvuzo ukushukumiseka enkulu phezulu kwaye kungenza ngalunye $150,000 okanye ngaphezulu kunyaka ngamnye ngokuxhomekeke indawo umgangatho amava.
Ku kuqonde ngakumbi kancinane ukuba abe CPA ngokweemfuno ixesha. Kufuneka ugqibe 150 iiyure zesidanga credit kwaye kufuneka nabo basebenza enikiweyo inani leeyure phantsi kweliso ngqo a CPA. Wena ke ube 18 iinyanga ukuba ahlale nabo badlule zonke iinxalenye ezine CPA uviwo. ke, oko kungathatha malunga 8 1/2 iminyaka ukuba abe CPA (kweminyaka emihlanu umsebenzi isidanga, iminyaka emibini emsebenzini kunye 18 iinyanga Kwathi iimviwo CPA). Okokuba kuya kuthatha ixesha ukuba i CA kuxhomekeke koko ilizwe oceba ukuziqhelanisa kwaye inqanaba yakho wemfundo namava professional. Ngokomzekelo, i-ICAS kukho ezine:
indlela yokungena ngqo ukuba lwabafundi abangafikeleliyo kwimiqathango, esifuna kweminyaka emihlanu yoqeqesho kunye nomqeshi eziphunyezwe ICAS;
indlela yokungena Graduate abo bafumene izidanga eyunivesithi, esifuna kweminyaka emithathu yoqeqesho kunye nomqeshi eziphunyezwe ICAS;
indlela yokungena Professional yabasebenzi ngemali onamava ukuba abaqeqeshiweyo asekwe zaseyunivesithi (ezisemthethweni njenge elilingana UK) okanye iminyaka emihlanu yamava umsebenzi ochaphazelekayo kunye
Endleleni umzila ovumela amalungu The Chartered Institute of Public Finance and mali (CIPFA) ithuba lokuba abe lilungu ICAS ngaloo mvuzwana CA nesikhundla.
Kukho iindledlana ezimbini; omnye ulinganisa anobuchule nolwazi olufanelekileyo kunye nezinye, ikhono lokwenza. Zombini mizila ifuna iminyaka esixhenxe yamava post-mfundo. Okungcono "apile-to-apile" uthelekiso bekuya kuba CPA = ICAS Pathway #2.
Yimalini kubiza ukufumana iphepha-mvume lakho CPA iyaguquguquka. Zonke ithi ifuna ukuba ube ubuncinane isidanga seBachelor izimali okanye ishishini kuquka inani izifundo ezifunekayo. Phantse zonke ithi ifuna ukuba urhola okungenani 150 Iiyure credit kanye. Ngaloo ndlela, yakho CPA ezemfundo icela ziya kwahluka ngokuxhomekeke kuyo ukuba ufuna isidanga master ukuba imali yakho yokugcina 25 iiyure college credit okanye uthathe iiklasi ngakumbi kwinkqubo yakho isidanga. Inkqubo isiqinisekiso ngokwayo iya kuxabisa malunga $3,000 kubandakanya a Ikhosi review CPA efanelekileyo nemirhumo ukuhlolwa. Emva kokuba kudlule uviwo, nani kuya kufuneka ukuba ugcine mvume yakho esebenzayo kunye nokuqhubeka iikhredithi zemfundo kunyaka ngamnye. Ezi ayahluka ixabiso kodwa zibiza phakathi $50-$100 per hour credit. Uninzi ithi ifuna emhlabeni 40 credits ngonyaka. Musa Ungakhathazeki nakuba. Ukuba ufumana umsebenzi kwi ingxelo inkampani kawonke, baya ukuhlawulela imfundo yakho phambili.
Ixabiso ukuze ube CA kuxhomekeke ilizwe ohlala kulo, imfundo kunye nomsebenzi wakho amava kwaye yintoni mbutho ufaka isicelo ukuba zokufumana kokuqinisekisa yakho.
Umzekelo, ukuba isicelo ICAS kwaye ukhetha Pathways #1 yaye #2 (ungeno ngqo ukusuka esikolweni okanye eyunivesithi) ke umqeshi wakho uya kuhlawula iindleko. Ukuba ukhetha Pathway #3 (abanamava Professional), i indleko, ndoxelelwa ngubani £ 5.750 - £ 13.900. indlela #4 (amalungu CIPFA) iindleko £ 1.035 kuba Ubungcali Pathway Iluncedo. Kuba Practical yoBuchule Pathway, i indleko: £ 596 ukuba isivumelwano yoqeqesho; £ 1.547 - £ 1.935 iimali iklasi; £ 292 imali iimviwo kunye £ 495 sonyaka ICAS / CIPFA okubafaneleyo, ubulungu. Ukuba kukho iyaqhubeka imfundo mvume neemfuno, baya kumiselwa ilizwe apho usebenza.
Ukuba nomdla asebenza phesheya okanye inkampani, ngoko kufuneka ukhethe i CPA. Ungafunda okuninzi malunga best izifundo CPA PrEP Apha. okukanye, ukuba ufuna ukuqala eyakho audit mkhuba India, ukhetha i CA. Ngaphezu, uviwo CA zazixabisa ngaphantsi xa kuthelekiswa kwiimviwo CPA. Nam enye yezi izitifiketi zingcono kunezinye. Bathi nje ezahlukeneyo ezisetyenziswa kwiinjongo ezahlukeneyo. Ungalindela ukwenza malunga lomvuzo elinye klk anikwe ukuba indawo, isikhundla somsebenzi, inkampani, kunye namava omsebenzi ziyafana. Ngokwenene eza phantsi into ofuna ukuyenza yaye apho ufuna ukusebenza. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Last Used 18 adlule
CPA, Surgent CPA Review, Discount Exclusive 40 usebenzisa namhlanje
Last Used 11 kwemizuzu
CPA, Surgent CPA Review, Discount Exclusive 34 usebenzisa namhlanje
Umhla WOKUPHELELWA: EyeDwarha 21, 2018
CPA, Surgent CPA Review, Discount Deep 39 usebenzisa namhlanje
CPA, Discount Exclusive, Fast Forward Academy 38 usebenzisa namhlanje
CPA, Unikezo olulodwa, Yokuchitha The CPA 33 usebenzisa namhlanje
CPA, Yaeger CPA Review, Discount Exclusive 41 usebenzisa namhlanje
CPA, Gryfina, Discount Exclusive 37 usebenzisa namhlanje
Last Used 25 kwemizuzu
CPA, Wiley CPAexcel, Discount Exclusive 36 usebenzisa namhlanje
Last Used 23 kwemizuzu
CPA, Roger CPA Review, ngezimali Offer 36 usebenzisa namhlanje
Last Used 7 adlule
CPA, Surgent CPA Review, Uzamo lasimahla 40 usebenzisa namhlanje
Last Used 57 adlule
CPA, Roger CPA Review, Okunye 37 usebenzisa namhlanje